Shacabka Muqdisho oo ka falceliyeyTalaalabadii Bandowga lagu soo rogay - Awdinle Online
Shacabka Muqdisho oo ka falceliyeyTalaalabadii Bandowga lagu soo rogay
Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka bilaabeen qorshooyin dhowr ah oo looga hortagayo faafida Cudurka Coronavirus oo kiisas kamid ah laga helay Soomaaliya.
Ciidamada ayaa shalay xirey masaajidyo dhowr ah oo ku yaalla Magaalada Muqdisho,kuwaas oo aan lagu dukan salaadii Jimcaha,kaidb markii ay Ciidamadu tageen Masaajidyada,hayeeshee uusan jirin amar kasoo baxey dowladda ee lagu xirayay.
Dhinaca kale Ciidamada Dowladda ayaa waxaa ay isla shalay meelo kamid ah wadada Maka Almukarama waxaa ay ka bilaabeen in dadka ay ka eryan Goobaha Ganacsiga,iyaga oo u sheegayay inay guryahooda dib ugu laabtaan.
Hadaba tallaabooyinka ay qaadeen Ciidanka Dowladda ayaa waxaa ka hadley Shacabka Magaalada Muqdisho.
Previous articleMaamulka Hirshabeelle oo ku baaqay inay is karantiilaan dadkii la kulmay Xildhibaankii laga helay Coronavirus
Next articleNuur Xasan Xuseen, Nuur –Cadde: Booliis, Samafale, Siyaasi iyo Diblomaasi